Iska diiwaan-gelinta UNHCR | Refugee Malaysia
Iska diiwaan-gelinta UNHCR
Tallabada ugu horeysa ee habka magan-gelyada waa is diiwaan-gelin. Diiwaan-gelintu waa duubista, xaqiijinta iyo cusboonaysiinta macluumaadka dadka ay UNHCR daneyso.
Si aad u codsato diiwaan-gelin, fadlan ku soo gudbi codsigaaga hab online-ah adigoo isticmaalaya foomka Diiwaan-gelinta cusub ee laga heli karo Mareegta Qaxootiga Malaysia.
Marka aad gudbiso codsigaaga, si naxariis leh u sug in UNHCR ay kula soo xiriirto arima ballanta ku saabsan darteed. Dhammaan codsiyada la soo diro waa laga shaqeyn doonaa laakiin tirada badan oo la soo gudbiyay awgeed, UNHCR ma awoodi doonto inay si degdeg ah uga jawaabto. Haddii aad mar hore dirtay codsi ballan, fadlan ha soo dirin mid kale.
Marka uu xafiiska UNHCR ee Malaysia kula soo xiriiro arimo ku saabsan taariikhda ballanka, waxaad u diyaar garoobi kartaa kulanka. Dhammaan dadka magangelyo-doonka ah (oo ay ku jiraan xubnaha qoyska ama dadka kale ee ku tiirsan) waa inay joogaan ballanta isdiiwaan-gelinta. Waa muhiim inaad bixiso macluumaad sax ah, run ah oo dhameystiran marka aad is diiwaan-gelinayso. Macluumaad aan dhameystirneyn ama aan sax ahayn waxay khatar ku tahay kayskaaga.
Waa inaad hubisaa inaad siiso faahfaahinta dhammaan xubnaha qoyskaaga haddii ay kula joogaan Malaysia iyo haddii ay meel kale oo adduunka ah joogaanba. Dhammaan xubnaha qoyska oo ay ku jiraan kuwa sida sharciga ah loo soo korsaday ama dhaqan ahaan. Xubnaha qoyska waxa kale oo ka mid ah waalidiinta (dhalasho iyo/ama korsaday), walaalaha (buuxa, bahwadaaga, la soo korsaday), caruurta (aad dhashay, soo korsatay, iyo caruurta guur ama xidhiidh hore ku dhalatay). Qof kasta oo diiwangashan wuxuu heli doonaa lambar fayl. Dhamaan xiriirada intaa kadib ee lala sameeyo Xafiiska waa inay muujiyaan nambarka faylka.
Marka lagu diiwaan-geliyo, waxaa lagu siin doonaa kaarka UNHCR ama warqad tixgelin (UC) oo ay ku xusantaay taariikh ay shaqeyn doonto. Fadlan u imaaw UNHCR taariikhda uudhacayo si aad u cusboonaysiiso kaarkaaga UNHCR ama warqadda tixgelinta (UC).
Inta lagu guda jiro caabuqa COVID-19: Si naxariis leh u sug UNHCR inay kuu soo wacdo cusboonaysiinta dukumiintiga. Ha u imaanin UNHCR ballan la’aan.
Dukumiintiyada loo baahan yahay
Fadlan soo qaado dhammaan dukumiintiyada la xiriira kiiskaaga, oo ay ku jiraan baasaboorrada, waraaqaha aqoonsiga, shahaadada guurka, shahaadada dhalashada, tirakoobka qoyska ama dukumiintiga aqoonsiga ee wadanka,buug yaraha adeegga ciidanka, shahaadooyinka caafimaadka, caddeynta diiwaan-gelin hore oo xafiis kale oo UNHCR, xafiiska UNRWA ama dowlad shisheeye.
Fadlan soo qaado dukumiinti kasta oo ay UNHCR bixiso sida kaarka aqoonsiga, Warqadda tixgelinta (UC), kaarka ballanta, iyo warqada tixraaca taariikhda ballantaada. Dukumiinti kasta oo laga helay Xafiis UNHCR oo aan ahayn kan Malaysia waa in sidoo kale la soo bandhigaa.
Haddii aad dhawaan ilmo dhashay, waa inaad diwaan-gelisaa dhalashadiisa oo aad ka heshaa shahaadada dhalashada Waaxda Diiwaan-gelinta Qaranka ee dawladda (NRD). Ma jirto wax khidmad lacag ah oo lagu bixinayo NRD haddii aad tan sameyso 60 maalmood gudahooda laga bilaabo dhalashada cunuga. Si kastaba ha ahaatee, 60 maalmood ka dib, waxaa laga yaabaa in lagu dalaco khidmada soo daahid diiwaan-gelinta.
Shakhsiyaadka ka diiwaan gashan UNHCR ee u baahan ilaalinta caalamiga ah waxa la siin doonaa dukumiintiga UNHCR oo sheegaya in qofka dukumiintiga wata uu hoos imanayo ilaalinta UNHCR.
Dukumiintiga aqoonsiga UNHCR wuxuu siiyaa wataha heer ilaalin taas oo yarayn karta halista xadhiga, una ogolaanaysa helitaan xaddidan ee adeegyada caafimaad, waxbarasho iyo adeegyada kale ee taageerada lagama maarmaanka ah ee UNHCR, ururada ay bahwadaaga yihiin ama jilayaasha kale.
Dukumiintiga UNHCR waa dukumiintiga aqoonsiga ee kuu aqoonsanaya inaad ku jirto ilaalinta UNHCR. Ma laha qiimo rasmi oo sharci ah Malaysia dhexdeeda mana aha baasaboor.